Feo Avy Ao Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2018 17:14 GMT
-Inona no ilain'i Bangladesh ankehitriny ho an'ny hoavy tsara kokoa? Angelmorn manana teboka folo momba izany.
- Rifat avy ao amin'ny Close your eyes and try to see [akipio ny masonao dia ezaho ny mijery azy] mitsikera ny fandotoana ara-peo ao Bangladesh, indrindra amin'ny fampiasana fanamafisam-peo.
-Mampahafantatra i Shafiur ao amin'ny imperfect world | 2006 fa maro amin'ireo vokatra manana marika malaza (Lamba, kojakoja fakantsary, Fitaovana filalaovana Golf, Kojakoja Finday sy Kojakoja Fiara) no amboarina ankehitriny ao Bangladesh.
-Ho an'ireo izay te ahalala bebe kokoa momba ny Banky Grameen, ilay nandresy tamin'ny loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana 2006 sy ny mpanorina azy, Dr. Muhammad Yunus, manana sary ‘Indray andro tao amin'ny Banky Grameen’ i Drishtipat.
- Kuensel online nitatitra fa hanatontosa ny fifidianany ankapobeny voalohany amin'ny taona 2008 i Bhutan. Nanolo-kevitra ny Vaomieram-pifidianana fa ny fepetra farany ambany indrindra ho an'ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta (MPs) dia ny fananana Baka (bacc)
- Norbu ao amin'ny bilaogy Kuzu-Bhutan nizara ny ahiahiny momba ny demaokrasia ho avy.
- Rimi nizara ny traikefany momba ny fitateram-bahoaka ao Calcutta.
- Dilip D'Souza ao amin'ny Death Ends Fun nanome tsiny ny politika momba ny fizarana IFA (asidra vy sy folika) ho an'ny vehivavy anaemika (tsy ampy ra) ao India.
- Razib Ahmed ao amin'ny South Asia Biz nitatitra fa hanana fahitalavitra sy radio tsy miankina manokana i Maldiva atsy ho atsy.
- Bilaogera Nepal nitsikera ireo mpiasan'ny kaominina ao Nepal afovoany-andrefana izay nanapoizina ireo alika mirenireny .
- Onlooker ao amin'ny Glasshouse mamaritra ny toe-draharaha farany ao Balochistan, fanjakana mikorontana ao Pakistan.
- Adil Najam ao amin'ny All things Pakistan mitatitra ny fomba himamoan'ny cricket sy ny Islamo fifandirana an'i Pakistan.
- Dhammikad ao amin'ny Bilaogy Moju mampahafantatra fa afaka manarama mpiady ao Sri Lanka amin'ny karama latsaky ny Rs. 100.000 Sri Lankey ny tsirairay.
- Muffee ao amin'ny Voices in my head nandefa sary ny kanto Henna teo an-tanany izay ampiharina araka ny fomban-drazana mandritra ny fankalazana ny Eid.